Ciyaartoyda Xulka England Oo Qaadan Doona Go’aan Layaab Leh Hadii Cunsuriyad Loo Geysto Mid Ka Mid Ah Xiddigahooda.
Ciyaartoyda xulka England ayaa isaga bixi doona garoonka kulamada isreeb-reebka koobka qaramada qaaradda yurub hadii mid ka mid ah xiddigahooda cunsuriyad loo geysto, waxaa sidaas hadal jeedin qurux badan oo lagu qabtay xerada tababarka St George ka sheegay kabtan Harry Kane.
Xulka Saddexda Libaax ayaa wajahi doona qaramada Czech Republic iyo Bulgaria muddo 4 maalmood gudahood ah, waxeyna go’aan adag oo wadajir ah ku qaateen in gabi ahaanba garoonka laga baxo hadii ciyaartoyda xulka ee madowga ah loo gafo.
Horaantii sanadkaan ayey aheyd markii taageerayaasha xulka Montenegro ay aflagaado u geysteen Danny Rose, Raheem Sterling iyo Callum Hudson-Odoi, balse markaas wax go’aan ah kama aysan qaadan, walow hadda la sugayo waxa ay sameeyaan kulamada ay jimaha iyo Isniinta lakala ciyaari doonaan Czech iyo Bulgaria.
Sidoo kale tababare Gareth Southgate ayaa ka dhawaajiyay in ciyaartoydiisa ay raaci doonaan hanaanka anshaxa ee UEFA isla markaana ay ogeysiin doonaan garsooraha hadii lagu xad-gudbo ka hor inta aysan qaadan go’aanka ugu dambeeya.
Abraham wuxuu qiray in Harry Kane uu u sheegay hadii ay garoonka farxad ku dareemi waayaan isla markaana loo geysto aflagaado iney garoonka ka wada bixi doonaan.